Xidhidhka FIFA Oo 27 Sanno Kadib Laba Mashruuc Ka Fulinaya Muqdisho
HomeAfricaXidhidhka FIFA Oo 27 Sanno Kadib Laba Mashruuc Ka Fulinaya Muqdisho
02/02/2015 Cabdirisaaq Maxamuud Caalin
Xidhidhka kubada cagta dunida ee FIFA ayaa mashaariic ka hirgelinaysa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, waxanay mashaariicdani noqonayaan kuwii labaad ee ay ka fuliyaan magalada Muqdisho, oo ay ugu dambaysay barnaaimij xidhidhka FIFA wato sanadkii 1986-kii.
Xidhidhka kubada cagta dalka Soomaaliya SFF ayaa fulin doona labadan mashruuc oo kala ah, xarun farsamo ah oo laga hirgelinayo garoonk jaamacada Muqdisho College university stadium iyo dhismaha garoon cusub oo nooca rooga leh ag.
Sanadkii 2013, FIFA waxay fulisay mashruuci ugu horeeyey mudo 27 sano ah ay Soomaaliya ka fuliso, kaasi oo ahaa mashruuc horumarineed dhinaca ciyaaraha ah oo ay ka fulisay magalada Muqdisho.
Dagaaladdii sookeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya oo inta badan burburiyey dhismayaashii guud ee dalka, oo ay ka mid yihiin dhismayaashi garoomada oo %90 burburay.
Sanadkii 2006 FIFA waxay Garoon casri ah oo roog leh ka hirgalisay isla caasimada Muqdisho kaasi oo ahaa dib u habayn iyo qalabayn ay ku samaysay Garoonka Banadir Stadium , wakhti xaadirkana ah ka lagu qabto horyaalka naadiyashaa kubada cagta oo 10 kooxod ah.
Wefti uu hogamineyo agaasimaha horumarinta ciyaaraha qarada Afrika Mr. Zelkifli Ngoufonja oo la kulmay gudoomiyaha xidhidhka kubada cagta Soomaaliya Sicid Carab Cabdiqani, ayaa lagu falan qeeyey sidii loo horumarin lahaa ciyaaraha Soomaaliya FIFA-na gacanta ugu weyn uga geysan lahayd.
Xidhidhka kubada cagta aduunka FIFA ayaa ku faraxsan xidhidhka kubada cagta dalka Soomaaliya SFF , shaqada ay ka qabtaan dhiiri gelinta dhalinyarada iyo waciyiigelinta, sidoo kale qabashada wareegyada ciyaaraha oo assaas uu ah dar dar gallinta dhinaca ciyaaraha kubada cagta, muhiimada ugu weyna ay tahay baladhinta wareegyada ciyaarahaasi iyo sidii looga suurto gallin lahaa inay ka soo qayb galaan gobolada dalka oo dhan.
Ugu dambayntina, Xidhidhka kubada cagta SFF oo mudo dhowr sanadood ah ay soo wajaheen khilaaf iyo muran, ayaa haatan uu muuqda inay dhankii horumarinta kubada cagta xoog badan galliyeen.
Horyaalka kubada cagta ee Muqdisho ka socda, dadweynaha ku dhaqaan magaladasina ay aad uu xiiseeyaan ayaa muujinaysa in xidhidhka kubada cagta dunida FIFA sii waadi doanaan taageerada dhanka horumaarinta iyo hirgelinta kala duwan ee ciyaaraha kubada cagta.
Real Madrid Oo 10 Ciyaaryahan Ku Garaacday Barca – Kulankii El Clasico
Liverpool vs Man City: Koox Isku-dhaf ah Oo Lagu Sameeyey
Pogba Oo Wacdaro Ka Dhigay Old Trafford, Guulna U Horseeday Man United